Akhiwa kanjani amapayipi amanzi? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wake wawabona amapayipi amanzi? Lezi "funnel" ezivela efwini leCumulonimbus zingamangaza ngaphezu kweyodwa nangaphezulu kokukabili uma zakha lapho uzulazula olwandle.
Kepha uyazi ukuthi zakhiwa kanjani? Sizokutshela.
1 Izinhlobo zamapayipi amanzi
2 Zakhiwa kuphi?
3 Ukulimala kwamapayipi kungadala
Izinhlobo zamapayipi amanzi
Ama-waterpouts, noma ama-waterpouts njengoba aziwa kanjalo, angaba izinhlobo ezimbili ezihlukene: i-tornadic noma i-non-tornadic.
I-Tornadic: njengoba igama labo liphakamisa, bayiziphepho emanzini. Ukuze zivele, kuyadingeka ukuthi isiphepho esinamandla kakhulu sivela enkampanini enkulu. Ziyizinto ezingavamile zesimo sezulu, ngoba izivunguvungu zivame ukuvela emhlabathini, ngoba ukungafani kwesibalo somoya kukhulu kakhulu. Noma kunjalo, noma ngabe zivelaphi, kufanele uqaphele kakhulu, njengoba umoya ungavunguza uye lapho I-512km / h.
Okungeyona-tornadic: imvamisa yakha ngaphansi kwesisekelo sefu seCumulus noma iCumulonimbus. Azisongeli njengeziphepho, kepha kusamele uhlale kude, njengoba umoya ungavunguza I-116km / h.
I-Watpout eGalicia. Isithombe - Twitter: @ lixo1956
Ama-waterpouts ajwayelekile kakhulu ku- izindawo ezishisayo, njengogu oluseningizimu-mpumalanga ye-United States. Ziyavela naseningizimu yeFlorida naseKeys. Futhi, yebo, kuyabonakala ezindaweni ezifudumele, yize zingajwayelekile. Okusanda kuvela ngo-Ephreli 13, 2016, eGalicia (eSpain), lapho omunye wabo ewela olwandle lwaseCabío, e-A Pobra do Caramiñal, futhi kwadala umonakalo omkhulu endaweni yokucima ukoma.
Ukulimala kwamapayipi kungadala
Lezi zimo zingadala umonakalo omkhulu. Zingathinta izikebhe, izikebhe, kanye nabantu abasogwini. Ngakho-ke, noma ngabe uhlala endaweni lapho bengahlali khona, uma kufika isiphepho, kungcono ungasondeli olwandle, uma kungenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Akhiwa kanjani amapayipi amanzi?
Ngiyethemba uPerez kusho
ulwazi oluhle, uwulondolozile umsebenzi wami, ngiyabonga kakhulu kepha ibingenalo ulwazi oluthile engxenyeni yomonakalo noma imiphumela, kepha ngiyabonga
Phendula u-Esperanza Perez
Ihlathi elibolile lingaba nesisombululo sokunqanda ukuguquka kwesimo sezulu